Heerarka sarrifka lacagaha ee caalamka. Qiimaha qiimaha ee maanta macaamiishiisa.
Bitcoin qiimaha maanta Bitcoin (BTC) In Oo shilin Soomaali Heerka Sarrifka Bitcoin (BTC) In US dollar Heerka Sarrifka Bitcoin (BTC) In Ethereum Heerka Sarrifka
Ethereum qiimaha maanta Ethereum (ETH) In Oo shilin Soomaali Heerka Sarrifka Ethereum (ETH) In US dollar Heerka Sarrifka Ethereum (ETH) In Bitcoin Heerka Sarrifka
Litecoin qiimaha maanta Litecoin (LTC) In Oo shilin Soomaali Heerka Sarrifka Litecoin (LTC) In US dollar Heerka Sarrifka Litecoin (LTC) In Bitcoin Heerka Sarrifka Litecoin (LTC) In Ethereum Heerka Sarrifka
XRP qiimaha maanta XRP (XRP) In Oo shilin Soomaali Heerka Sarrifka XRP (XRP) In US dollar Heerka Sarrifka XRP (XRP) In Bitcoin Heerka Sarrifka XRP (XRP) In Ethereum Heerka Sarrifka
Ethereum Classic qiimaha maanta Ethereum Classic (ETC) In Oo shilin Soomaali Heerka Sarrifka Ethereum Classic (ETC) In US dollar Heerka Sarrifka Ethereum Classic (ETC) In Bitcoin Heerka Sarrifka Ethereum Classic (ETC) In Ethereum Heerka Sarrifka
Xisaabiyaha 'Lacagta digital' - adeeg internet ah oo kuu oggolaanaya inaad xisaabiso xaddiga iibsashada ama iibinta hal lacagta digital qaraabo mid kale ama tirada aaladaha lacagta iibinta ama iibsashada lacagta qaran ee caadiga ah.
Xisaabiyaha lacagta digital wuxuu lasocdaa heerar deg deg ah oo qadka tooska ah ee hada jira ee lacagaha loo isticmaalo 'aaladaha lacagta hadda' iyo dhamaan lacagaha wadanka ee aduunka.
Qiimaha Lacagta digital waxaa lagu go'aamiyaa natiijooyinka ganacsiga dhameystiran ee is-dhaafsiga adduunka.
Xisaabiyaha lacagta digital wuxuu adeegsadaa celceliska celceliska dhammaan isweydaarsiga adduunka ee loo doortay 'lacagta digital' maanta.
Qiimaha lacagta Qaranka waxaa maalin walba dejiya Bangiga Qaranka ee Yurub. Xisaabiyaha sarrifka lacagaha 'lacagta digital' wuxuu u adeegsadaa macluumaadkan ilo wareedyo rasmi ah.
U beddelashada lacagta digital ama ku beddelashada hal crypto mid kale qiimo macquul ah waxaa lagu sameeyaa qolka isweydaarsiga lacagta digital. Heerka sarrifka lacagta digital ee meesha sarrifka waxaa loo dejiyaa iyadoo lagu saleynayo heerarka lacagta digital, kaas oo lagu kormeero daqiiqad kasta oo ku jira xisaabiyaha sarrifka lacagaha ee crypto.
Eeg sicirrada dhammaan lacagaha loo yaqaan 'aaladaha lacagta' ee maanta, isla heerka euro, doollar, yuan iyo lacagaha kale ee adduunka ee adeeggayaga tooska ah "xisaabiyaha lacagta" una tarjun wixii lacag ah heer ku habboon.
Beddelaha 'cryptoptorency' - magaca labaad ee xisaabiyaha 'lacagta digital' waa adeeg internet ah oo kuu oggolaanaya inaad xisaabiso tirada saxda ah ee loo yaqaan 'crypto' si aad u iibsato ama ugu sii iibiso lacagta digital kale ama lacag qaran.
Beddelaadaha 'crypto' wuxuu adeegsadaa celceliska celceliska maalinlaha ah ee maalinlaha ah ee maanta iyo heerka rasmiga ah ee lacageed heer qaran ah.
Waad u beddeli kartaa wixii crypto ah wixii kale ama dollar iyo euro, iwm.
Ku habboonaanta adeegsiga qadka, waxaan ku soo bandhignay boggan waxyaabaha ugu caansan ee loo yaqaan 'aaladaha lacagta now':
Xisaabiyaha Lacagta digital onlayn
Xisaabiyaha lacagta digital onlayn wuxuu kuu oggolaanayaa inaad isla markiiba fahanto oo aad xisaabiso qadarka loo baahan yahay si loogu beddelo mid ka mid ah lacagta digital mid kale.
Heerar badan oo sarrifka lacagaha 'lacagta digitalrency' ah oo loogu talagalay lacagaha kale ee loo yaqaan 'aaladaha lacagta' iyo lacagaha lacagaha ee qaran waxaa lagu xisaabiyaa salka ku saleysan heerarka iskutallaabinta. Tusaale ahaan, heerka sarrifka ee Bitcoin (Bitcoin, BTC) illaa Oo shilin Soomaali waxaa inta badan la xisaabiyaa iyadoo ku saleysan heerka sarrifka Bitcoin (Bitcoin, BTC) illaa doollarka Mareykanka iyo Oo shilin Soomaali doollarka Mareykanka.
Iyo haddii aad rabto inaad ku xisaabiso xisaabiyaha xaddiga wareejinta Litecoin (Litecoin, LTC) Oo shilin Soomaali, markaa xisaabiyaha internetka ee 'lacagta digital' wuxuu isticmaalaa sedex sarrif:
Litecoin (Litecoin, LTC) illaa Bitcoin (Bitcoin, BTC)
Bitcoin (Bitcoin, BTC) illaa Doolarka Mareykanka
Dollarka Mareykanka ah illaa Oo shilin Soomaali
Si loo xisaabiyo qiimaha lacagaha, isha ayaa maanta si rasmi ah loo aasaasay qiimayaal ka socda baanka qaranka iyo Bangiga Yurub.
Si loo xisaabiyo qiimaha lacagaha 'aaladaha lacagta' maanta, celceliska heerarka crypto kasta waxaa loo isticmaalaa xaraashka dhammaan isweydaarsiga adduunka maanta.
Ka sokow bogagga caawimaadda iyo Xisaabiyaha lacagta xisaabiyaha, lacagta qalabka casriga ah barnaamijka, waxaa jira adeegyo lacageed oo badan oo bilaash ah goobta.
cryptoratesxe.com waqtiga dhabta ah wuxuu ilaaliyaa dhammaan sicirka kala sarreeya ee dhammaan lacagaha iyo dhammaan aaladaha lacagta adduunka.
Xisaabiyaha 'lacagta digital' khadka tooska ah ee internetka, macluumaadka ku saabsan sicirka sarrifka waxaa laga soo qaatay ilo wareedyo furan oo rasmi ah.
Adeegsiga xisaabiyaha lacagta digital onlayn waa mid aad u fudud.
Si aad u ogaato sicirka hal crypto mid kale, geli magacyada aaladaha lacagta kuwan meelaha xisaabiyeheenna dhagsii badhanka xisaabinta. Waad geli kartaa fikradooda heerka caalamiga ah. Si aad u aragto heerka sarrifka lacagaha 'lacagta digital', bedesho goobta lacagaha ay qaraabo yihiin midba midka kale, dhagsii iskuxiraha "bedelka".
Haddii aad ubaahantahay sicirka doorshada 'lacagta digital', tusaale ahaan, doollarka Mareykanka, ka dib gali magaca loo yaqaan 'lacagta digital' ee qeybta koowaad ee xisaabiyaha lacagta digital, iyo kan labaad ee "dollarka Mareykanka". Haddii aad ubaahantahay isku-darka sicirka doollarka Mareykanka ee loo yaqaan 'crypto', markaa dhagsii "badal" oo xisaabiyaha ayaa ku tusi doona heerka ka soo horjeedda.
Xisaabiyaha waxaa jira wado labaad oo lagu ogaanayo sicirka loo yaqaan 'crypto crypto' lacag kasta oo kale oo adduunka ah.
Bogga adeega, bogga xisaabiyaha sarrifka internetka ee 'cryptoratesxe.com' ee ku jira Xisaabiyaha lacagta xisaabiyaha, lacagta qalabka casriga ah ee liistada lacagta, raadso lacagta digital la doonayo oo guji isku xirka xaddiga beddelka crypto-ka oo u beddel lacag kale oo aad u baahan tahay.
Xisaabiyaha lacagta digital, macluumaadka ku saabsan sicirka sarrifka rasmiga ah ayaa la cusbooneysiiyaa isla marka ay dejiso bangiyada rasmiga ah, macluumaadka ku saabsan celceliska heerka lacagta digital waxaa laga qaadaa tirakoobka iibka ee lacagta digital kasta maalinta ugu dambeysa ee isweydaarsiga lacagta digital adduunka oo dhan.
Waxaan kuu rajeynayaa guul inaad ku adeegsato adeegga xisaabinta ee 'lacagta digital' internetka!